IXcoin စျေး - အွန်လိုင်း IXC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို IXcoin (IXC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ IXcoin (IXC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ IXcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $517 572.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ IXcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
IXcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
IXcoinIXC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0438IXcoinIXC သို့ ယူရိုEUR€0.0372IXcoinIXC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0336IXcoinIXC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.04IXcoinIXC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.397IXcoinIXC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.277IXcoinIXC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.979IXcoinIXC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.164IXcoinIXC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0586IXcoinIXC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0612IXcoinIXC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.983IXcoinIXC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.339IXcoinIXC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.238IXcoinIXC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹3.29IXcoinIXC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.7.35IXcoinIXC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0601IXcoinIXC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0664IXcoinIXC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.37IXcoinIXC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.305IXcoinIXC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥4.64IXcoinIXC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩52.09IXcoinIXC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦16.59IXcoinIXC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽3.23IXcoinIXC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.21
IXcoinIXC သို့ BitcoinBTC0.000004 IXcoinIXC သို့ EthereumETH0.000118 IXcoinIXC သို့ LitecoinLTC0.000784 IXcoinIXC သို့ DigitalCashDASH0.000464 IXcoinIXC သို့ MoneroXMR0.000479 IXcoinIXC သို့ NxtNXT3.16 IXcoinIXC သို့ Ethereum ClassicETC0.00643 IXcoinIXC သို့ DogecoinDOGE13.1 IXcoinIXC သို့ ZCashZEC0.000484 IXcoinIXC သို့ BitsharesBTS1.71 IXcoinIXC သို့ DigiByteDGB1.63 IXcoinIXC သို့ RippleXRP0.154 IXcoinIXC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00151 IXcoinIXC သို့ PeerCoinPPC0.148 IXcoinIXC သို့ CraigsCoinCRAIG20.01 IXcoinIXC သို့ BitstakeXBS1.87 IXcoinIXC သို့ PayCoinXPY0.766 IXcoinIXC သို့ ProsperCoinPRC5.51 IXcoinIXC သို့ YbCoinYBC0.00002 IXcoinIXC သို့ DarkKushDANK14.08 IXcoinIXC သို့ GiveCoinGIVE94.99 IXcoinIXC သို့ KoboCoinKOBO10.41 IXcoinIXC သို့ DarkTokenDT0.0403 IXcoinIXC သို့ CETUS CoinCETI126.65